Waaheen Media Group » Ganacsatada Borama oo Maalintii labbaad Mudahaarado dhigaya
Browse:Home Videos Ganacsatada Borama oo Maalintii labbaad Mudahaarado dhigaya	Ganacsatada Borama oo Maalintii labbaad Mudahaarado dhigaya
Comments Off	Ciidanka Booliska oo la tacaayala joojinta Mudaharaadaasi
Hargeysa(Waaheen) Magaalada Boorama ee xarunta Gobolka Awdal ayaa maalintii labbaad waxa ka soconaya Mudaharaado lagaga soo horjeedo dawlada hoose ee Magaaladaasi.
Dadweynahan mudaharadayey ayaa ahaa ganacsatada yar yar ee iibiya Khudaarta, caanaha iyo waliba alaabooyinka yar yar, waxaanay sheegen in dawlada hoose ee Borama ku soo rogtay cashuur aad u badan oo aanay iska bixinkarayn, waxaanay sheegen in halkii markii hore laga qaadijiray Kun Shillin imika lagu soo rogay in ay bixiyaan saddex Kun oo Shillin Somaliland ah.
Mudaharaadayaasha ayaa markii danbe waxay isku dhaceen cidiinka Booliska ee Borama halkaasi oo ciidaanku rasaas u adeegsadeen sidii ay u kala kaxay n lahayeen dadkaasi.
Dawlada Hoose ee Borama ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho cabashada ganacsatada yar yar.
Dadweynaha reer Borama ayaa waxa isku darsantay Cashuur barar iyo Sicir-barar.